Mirrors Nepal » च्याम्पियन्स लिग : चेल्सी र बार्सिलोनाको ‘महाभिडन्त’ आज, बदला लिने दाउमा बार्सिलोना
३० फाल्गुन २०७४ |
च्याम्पियन्स लिग : चेल्सी र बार्सिलोनाको ‘महाभिडन्त’ आज, बदला लिने दाउमा बार्सिलोना
- मिरर्स संवाददाता
३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०९:४४
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा आज राति एक बहुप्रतीक्षाको खेल हुँदैछ । प्रतियोगिताको अन्तिम १६ अन्तर्गत दोस्रो लेगमा स्पेनिस महारथि बार्सिलोना र इंग्लिस च्याम्पियन चेल्सी आमनेसामने हुँदैछन् । यसै खेलबाट अन्तिम आठमा पुग्ने टोलीको टुंगो लाग्ने छ ।
यी दुई टोलीबीच यसअघिको चेल्सीको घर लन्डनमा भएको पहिलो लेगको खेल १–१ को बराबरीमा सकिएको थियो । गोल बराबरी भए पनि अघिल्लो लेगबाट बार्सिलोनालाई अवे गोलको एडभान्टेज छ । तसर्थ, आजको खेलमा बार्सिलोना थोरै पनि सुरक्षित हुनेछ ।
तर, गत वर्षको इंग्लिस प्रिमियर लिगको च्याम्पियन तथा यो सिजन अन्तिम चारमा पर्न संघर्ष गरिरहेको चेल्सी आज बार्सिलोनाको घर क्याम्प नोउमा ‘भव्य’ योजना लिएर उत्रिँदैछ । खेलअघिको पत्रकार समेलनमा बोल्दै चेल्सीका कोच एन्टोनी कोन्टेले बार्सिलोनासँगको खेल भव्य हुने बताएका छन् ।
चेल्सी त्यही टिम हो, जसले सन् २०१२ मा बार्सिलोनालाई सेमिफाइनलमा ३–२ ले स्तब्ध बनाउँदै फाइनल यात्रा तय गरेको थियो । उक्त वर्ष पहिलो लेगमा चेल्सीले आफ्नो घरमा बार्सिलोनालाई १–० ले जितेको थियो ।
चेल्सी ६ वर्षपछि बार्सिलोनाको घर क्याम्प नोउ उत्रिँदा इतिहास दोहोर्याउने योजनासहित मैदान उत्रिनेछ । पत्रकार सम्मेलनमा कोन्टेले बार्सिलोनाविरुद्ध ‘रणनीतिक’ खेल पस्किने बताएका छन् ।
यता, बार्सिलोना भने आज राति आफ्नो घर क्याम्प नोउमा उत्रिँदा खेल जित्न मात्रै चाहँदैन, ऊ ६ वर्षअघि सेमिफाइनलमा चेल्सीसँग भोगेको नमिठो हारको मिठो बदला लिन पनि चाहन्छ । सन् २०१२ मा स्टार मेस्सीले पेनाल्टी मिस गरेपछि बार्सिलोना चेल्सीसँग हार्दै प्रतियोगिताबाटै आउट भएको थियो ।
आजा बार्सिलोनाका लागि चेल्सीसँग त्यसबेलाको बदला लिने उचित समय हुनसक्छ । ६ वर्षअघिको खेलमा पेनाल्टी मिस गरेका मेस्सी अहिले पनि बार्सिलोनाका लागि प्रमुख खेलाडी छन् । मेस्सी तिनै खेलाडी हुन्, जसले अघिल्लो लेगमा चेल्सीविरुद्ध गोल गर्दै चेल्सीको पोस्टमा पहिलो गोलको रेकर्ड बनाएका थिए ।
आज राति आफ्नो घरमा हुने खेलमा मेस्सीले फेरि गोल गलार्न् ? वा ६ वर्षअघिको निराशा बिर्सन खुसी फर्काउलान् ? त्यो हेर्न पर्खनुपर्छ ।
बार्सिलोनाका प्रशिक्षक अर्नेस्टो भाल्भर्डेले खेलअघिको पत्रकार सम्मेलनमा चेल्सीसँग ‘पूर्ण’ खेल खेल्ने बताएका छन् । उनले चेल्सी बलियो टिम भएको भन्दै सावधानी अपनाएर खेल्नुपर्ने बताएका छन् ।
अघिल्लो लेगको नतिजाअनुसार आजको खेलमा बार्सिलोनाले चेल्सीलाई गोलरहित बराबरीमा रोक्न सके मात्रै पनि जितका लागि पर्याप्त हुनेछ, अवे गोलका आधारमा । तर, यदि चेल्सीले बार्सिलोनाको पोस्टमा १ गोल मात्रै हान्यो भने उसले चेल्सीलाई गोलअन्तरमै हराउनुपर्ने हुन्छ ।
खेल आज राति नेपाली समयअनुसार (बिहीबार बिहान) १ः३० बजेबाट सुरु हुनेछ । आजै राति १०ः४५ बजेबाट टर्किस क्लब बेसिकटास र जर्मन क्लब बार्यन म्युनिख पनि अन्तिम १६ को दोस्रो लेगको खेल खेल्दैछन् ।
इनिएस्टा भन्छन्– ‘हामी रसिया विश्वकप जित्न सक्षम छौं’
इनिएस्टा अझै पनि क्लबका लागि महत्त्वपूर्ण सदस्य : पिके
विश्वकपबारे लिजेन्ड म्याराडोनाले मेस्सीलाई दिए यस्ता ‘सुझाव’
बार्सिलोना छाड्ने–नछाड्नेबारे इनिएस्टाले मुख खोले
सृष्टिलाई दोस्रोले तनाव
पत्रकारलाई साम्राज्ञीको खप्की
भोलिदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल हुँदै, यी हुन् तीन रामोञ्चक खेलहरू
मेरा लागि रसिया विश्वकप अन्तिम हुनसक्छ : स्वारेज
मेरो आगामी भविष्यबारे विश्वकपअघि निर्णय लिन्छु : ग्रीजम्यान
ड्रोग्बा भन्छन्– ‘मेस्सी पेले र म्यारोडोनाको स्थानमा पुगिसकेका छैनन्’
‘च्याम्पियन्स लिग रियल र बार्सिलोनाले जित्न सक्छन्, किनभने त्यहाँ रोनाल्डो र मेस्सी छन्’
अर्जेन्टिनाका लागि रसिया विश्वकप प्रतिष्ठाको लडाइँ : मेस्सी
© 2017 - मिरर्स नेपाल. स्वार्धिकार सुरक्षित @ mirrorsnepal.com